June 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Jun 30, 2018 0
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo ah barnaamij mug weyn oo habeen kasta ka baxa idaacada alfurqaan waxaa caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 30 06 2018
Dhagayso:Mu’assasada Al-Xikma iyo waxyaabaha lagu barto.(Sawirro Soo Jiidasho Leh)
cusmaan	 Jun 30, 2018 0
Magaalada Jilib ee gobalka Jubada-dhexe waxaa ku yaal xarumo waxbarasho oo kala duwan kuwaasoo bulshada ku dhaqan ay aad uga faa'iideystaan. Mu’assasada Al-Xikma oo ku taal magaalada Jilib dhawaan waxaa ka dhacday munaasabad si heer…
Waaliga Jubbooyinka Oo ka sheekeeyay Wax soo saarka Beeraha Wilaayada.(Dhagayso Q:5-aad Waraysi).
Waaliga Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka oo waraysiyo gaar ah siiyay Idaacadda Al-Furqaan ayaa ka hadlay arimo kala duwan. Qeybta shanaad waraysigan gaarka ah ee ay la yeelatay Al-Furqaan, wuxuu waaligu kaga sheekeeyay horumarka…
warka duhurnimo waxaa maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg warka duhurnimo 30 06 2018
Qaraxyo Lagu dhaawacay Gudoomiyiha Shabeellaha Hoose, Askar Amisom-na lagu dilay Oo ka dhacay…
Qarax ka dhacay deegaanka Siinka-dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu dhaawacay xubno katirsan maamulka gobolka Shabeellaha-hoose ee dowladda federaalka oo uu ugu weynyahay gudoomiyaha gobolkaas. Wararka ay heleyso Al-Furqaan…
Kamiin ka dhacay Duleedka magaalada Kismaayo.
Ciidamo katirsan Jabhadda Wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa weerar jidgal ah waxay u dhigtay ciidamo katirsan kuwa Maraykanka uu wato ee dhawaan soo degay deegaanka Baar-sanguuni ee duleedka Kismayo. Weerarka dhabbagalka oo ahaa…
Dhagayso: Qiso Saameyn leh Oo ku saabsan Istish-haadka hogaamiye sare oo katirsan Al-Qaacidada…
cusmaan	 Jun 30, 2018 2
Waa qiso saameyn leh, hadana xanuun badan oo kuu muujineysa xaaladaha ay ku noolyihiin Mujaahidiinta Caalamka iyo hogaankooda. Qisadan waxay ku saabsantahay istish-haadka Sheekh Abil Xasan Rashiid Al-buleydi oo ahaa madaxii Lajnada…
warka subaxnimo waxaa saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg warka subaxnimo 30 06 2018.lite
Saldhig ciidan oo ku yaala dalka Maali oo la kulmay weerar culus.
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in rag hubeysan ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala dalkaas, kaas oo ay ku suganyihiin ciidamo wadajir ah oo ka socoda dowladaha saaxilka ee duulaanka kusoo qaaday Maali.…
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 15-10-1439
cusmaan	 Jun 29, 2018 0
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah, oo lagu soo gudbiyo arimaha Caalamka Islaamka markaas ka taagan. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 29-06-2018